नयाँबस्तीमा भएको घटनाको शवको अवशेष फेरी पनि अर्को फेला पर्यो – Dainik Samchar
June 9, 2021 238
काठमाडौ । कलंकीमा एक वर्ष अघि भएको घटनाकै झल्को दिनेगरी काठमाडौं महानगरपालिका–६ बौद्धस्थित नयाँबस्तीमा भएको घटनाको शवको अवशेष फेरी पनि फेला परेको छ । बोरामा आधा मात्र शव भेटिएको ठाउँ नजिकै अन्य अवशेष पनि फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
नयाँबस्थितस्थित नौ तलेमा एक महिलाले मंगलबार मानव शरीरको दायाँ पैताला सहित केही अंश देखेकी थिइन् । महिलाले खबर गरेपछि अनुसन्धानका लागि कुकुर सहित प्रहरी टोली पुगेको थियो । त्यो शव कसको हो भन्ने अझै खुलेको छैन ।
मंगलवार शव फेला परेको स्थान भन्दा ५ सय मिटर पर अवशेष फेला परेको हो । अवशेष पोलिएको अवस्थामा फेला परेको जनाएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता (एसपी) रमेश बस्नेतले केही अवशेष फेला परेको जनाएका छन् ।
मंगलवार फेला परेको अंशको नमुना डिएनए परिक्षणका लागि प्रहरीले पठाएको छ । साथै शव पोष्टमार्टमका लागि पनि पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रकृति हेर्दा घटना दुई साता अघि भइसकेको हुनसक्ने अनुमान प्रहरीले गरेको छ । डीएनए परीक्षणका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालले प्रोफाइलिङ गर्ने बताइएको छ । शवको पहिचान र घटनास्थलको खोजीमा प्रहरी जुटेको छ ।
PrevWHO भन्छ यी टिप्स प्रयोग गर्नुस तपाईंलाई को:रोना कहिल्यै लाग्दैन
Nextमन्दिरमा लगेर सुटुक्क शिल्पा संग बिहे गरेका अक्षयले आखिर रविना लाई नै किन अपनाए ?
घान्द्रुक जीप दुर्घटनामा अस्ताएका पन्तले सानैमा बुबा र दाईलाई सवारी दुर्घटनामै गुमाएका थिए
नायिका स्वेता खड्काबारे नराम्रो बोलेपछि सुस्मा कार्कीले धुलाई भेटिन्, अनि धुरुधुरु रुँदै प्रहरी कहाँ पुगिन्!
मनिषा कोइरालाको घर कुनै राजमहल भन्दा कम छैन (हेर्नुहोस् तस्विरमा)
१० जना हिरोहरुसँग सुत्दै हिड्ने केटी हो रेखा थापा : शिल्पा (5211)